ခေါ်ဆိုမှုနှင့် SMS တွင် flash | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » personalization Apps ကပ » ခေါ်ဆိုမှုနှင့် SMS တွင် flash
ခေါ်ရန်နှင့် SMS ကို APK ကိုတွင် flash
Google Play တွင်ခေါ်ဆိုမှုနှင့် SMS App ကိုပေါ် No.1 Flash ကိုခေါ်ရန်တွင် flash နဲ့ SMS ကိုတစ်ဦးစမတ်နှင့်ဖြစ်ပါသည် ထိပ်တန်းနှုန်း ကို Google Play စတိုးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်လျှောက်လွှာ။ ခေါ်ဆိုမှုနှင့် SMS app ကိုအပေါ် flash သင့်ကင်မရာ၏ Flash ကိုမှိတ်နှင့်အတူအဝင်ခေါ်ဆိုမှုများနှင့် SMS အပေါ် flash ကိုသတိပေးချက်များကိုပေးသည်။
SMS ကိုလျှောက်လွှာအပေါ်ခေါ်ရန်နှင့် Flash တွင် flash သင်သည်ခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ် SMS တခုလက်ခံရရှိသည့်အခါ blinking စတင်ရန်သင့်ရဲ့ device ကိုကင်မရာလက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်အများဆုံးတောက်ပ Flash ကိုမှိတ် app ကိုသူတို့ခေါ်ဆိုမှုနှင့် SMS အပေါ်လျှပ်တပြက်စသည်တို့ကိုဆေးရုံကဲ့သို့သောအသံတိတ်၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်ဘယ်မှာအရပ်တွင်အစည်းအဝေးများသို့မဟုတ်အလုပ်အတွက်အများအားဖြင့်အလုပ်ရှုပ်နေသောသူတို့ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သော application ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ခြင်းဖြင့်သင်၏အသက်တာပိုမိုလွယ်ကူစေမည်ဖြစ်ပါသည် သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်း device ကိုအများအားဖြင့်အသံတိတ်ဖြစ်ပါတယ်လျှင်သင်လက်လွတ်ဖို့ခညျြနှောငျဖြစ်ကြောင်း, flash ပါ Blink မှတဆင့်အကြောင်းကိုတိုင်းခေါ်ဆိုခများနှင့် SMS ကိုငါသိ၏။
ခေါ်ရန်အပေါ် flash နဲ့ SMS ကို app ကိုအသုံးပြုသူဖော်ရွေခြင်းနှင့်သုံးစွဲဖို့တကယ်လွယ်ကူသည်။ SMS ကိုအထဲတွင်ပါဝင်သည့်ရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အပေါ်ခေါ်ရန်နှင့် Flash အပေါ် flash ။ အဝင်ခေါ်ဆိုမှုနှင့် SMS ကိုအပေါ်ကြားကာလနှင့် Flash ကိုမှိတ် count ကမျက်တောင်ခတ်ဒီ flash ကိုအကြောင်းကြားစာ App ကိုအတွင်းထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအမြိုးမြိုးကိုဖုန်းမြည်သံ mode မှာခေါ်ဆိုခများနှင့် SMS ကိုလျှောက်လွှာပေါ်တွင် Flash ကို enable သို့မဟုတ် disable နိုင်ပါတယ်။
♦ခေါ်ရန်နှင့် SMS ကိုလျှောက်လွှာတွင် Flash ကိုသငျသညျကို enable / ခေါ်ဆိုခများနှင့် SMS ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျလုံးဝကို disable နိုငျသောလမ်းအတွက်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်, သို့မဟုတ်သင်ရုံမခေါ်သို့မဟုတ် SMS ဖြစ်စေများအတွက် flash ကိုမှိတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသုံးစွဲဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
♦ Flash ကိုမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းနေသောကြိမ်နှုန်းသင့်ကိုယ်ပိုင်အကြိုက်အညီပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။
1 ။ Flash ကိုအဝင်ခေါ်ဆိုမှုများတွင်မျက်တောင်ခတ်သည်။
2 ။ Flash ကိုဝင်လာသော SMS ကိုတွင်မျက်တောင်ခတ်သည်။
3 ။ Flash ကို Blink Interval ညှိနှိုင်းမှု။
4 ။ Flash ကိုအချိန်ကိုညှိနှိုင်းမှု။
5 ။ SMS ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ Flash blinking ၏ထိန်းချုပ်ရေးငွေပမာဏ။
6 ။ ခေါ်ရန်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည် Modes တွင် SMS (Normal, တုန်ခါမှု, အသံတိတ်) ရက်နေ့တွင်အသုံးပြုမှု Flash ကို
အသံတိတ် Mode ကိုပါ။
ပုံမှန် Mode ကိုပါ။
vibrate mode မှာတော့။
ခွင့်ပြုချက်များက Android6သုံးပြီး device များပေါ်တွင်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင်အကြောင်း
Google ကနှုန်းအဖြစ်, ကင်မရာဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုချက်မူဝါဒအ Play အဖြစ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ Android ဗားရှင်း6(Marshmallow) သို့မဟုတ် သာ. ကြီးစတင် app ကိုအတူတဲ့အခါအသုံးပြုသူခေါ်ရန်နှင့် SMS ကိုပြည်နယ်ဟုမေးပါလိမ့်မည်။
ကင်မရာ: အဆိုပါ flash ကိုအလင်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်။
Call: အသုံးပြုသူရဲ့ device ကိုအပေါ်တစ်ဦးခေါ်ရန်လည်းမရှိသည့်အခါ flash ကိုအလင်းဖွင့်နိုင်အောင် app ကိုသိစေရန်။
စာတို အဆိုပါ flash ကို ON လှည့်နိုင်ဒါ SMS တခုရောက်ရှိသည့်အခါ app ကိုသိစေရန်။
အန်းဒရွိုက် Pie (9) ထောက်ခံမှုကဆက်ပြောသည်။ app ကို setting များကိုစိတ်ကြိုက်စွမ်းရည်။
နယူးဒီဇိုင်း / Compatibility တိုးတက်လာခဲ့သည်။
24 /7ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုကဆက်ပြောသည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုတုန့်ပြန်ချက်အားဖြင့်သင်တို့၏အတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းကိုသိပါစေ။ ပျော်မွေ့ !!!!!!!!!!!!!
6.13 ကို MB